Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Mandady ny trambo | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Mandady ny trambo
Nanaitra ny maro ny tatitra farany navoakan’ny Foibe fandrindrana ny ady atao amin’ny coronavirus, nilaza ny antontanisa momba ity aretina ity eto amintsika. Ny tena nanaitra ny maro dia ny fisian’ireo olona dimy manoy ny ainy sy ny fiakaran’ny tahan’ny olona voa, izay niakatra ihany koa. « Mitranga ity ilay nahiana », hoy ny sasany. « Ho ratsy izy ity », hoy ny hafa.
Araka ny re dia efa faritra 14 eto amin’ny Nosy no ahitana ity aretimandoza ity ka Analamanga, Boeny, Vatovavy Fitovinany ary Matsiatra Ambony no tena nisy ny marary betsaka hatreto. Efa nahiana ihany izao fisehoan-javatra izao raha ny fivahavahan’ny fepetra fiarovana no jerena. Saika efa tsy ahitana olona manao arovava-orona intsony mantsy eny an-tanàna sy eny an-dalana eny. Izay mitondra izany indray aza no toa ihomehezan’ny olona sy ataony tsara banjina. Tsy lazaina intsony ny tsy fanajana ireo fihetsika sakana hafa toy ny elanelana iray metatra sy ny fanasana tanana matetika sy ny sisa.
Ekena fa tsy eto amintsika ihany no mihamahazo vahana ity aretina ity fa manerantany mihitsy. Ireo firenena lazaina fa matanjaka sy lehibe tokoa aza mantsy mbola maro ireo sahirana amin’ny ifehezana azy. Na any aminy anefa na eto amintsika dia fahavalo iray ihany no atrehana. Samy manana ny paikadiny ny firenena tsirairay. Ka dieny tsy mbola vohitra may ary tsy tanàna forehitra dia aleo hamafisina ny fepetra ary henjanina ny sazy raha ilaina izany.
Tsy mbola mipaika akory mantsy ity ny vanim-potoana mangatsiaka izay mampirongatra ity valanaretina ity dia efa izao no zava-misy. Tsy ny mpitondra ihany anefa no tokony handray fepetra fa miainga any amin’ny tsirairay ny ady. Aleo mailo fa mandady ny trambo.